8 barnaamij si loogu abuuro kombuyuutar xitaa adiga oo aan ogeyn sida loo barnaamijyo 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Waxaa jira barnaamijyo kuu oggolaanaya inaad sameysid ciyaaro xittaa haddii aad waxyar ama aanad aqoon u lahayn barnaamijyada. Barnaamijkan waxaa suurtagal ah in lagu horumariyo cayaaraha iskudhafka 2D iyo 3D, oo leh mowduucyo u dhexeeya RPG ilaa cayaaraha waxbarashada. Waxaa jira ikhtiyaarro bilaash ah oo lacag la siinayo oo ku habboon miisaaniyad kasta oo mashruuc ah.
Loo maqli karo / dunta
Twine waa mid ka mid ah qalabka abuurista ciyaarta oo u baahan in yar ama aan aqoon u lahayn barnaamijka barnaamijka. Si kastaba ha noqotee, barnaamijka, wuxuu ku xaddidan yahay horumarinta cayaaraha ku saleysan qoraalka, kaas oo u oggolaanaya abuurista sheekooyin is-dhexgal ah iyo kuwa aan toos ahayn.
Ku habboon hal-abuurka, doorka ciyaarta iyo thrillers qarsoodi, ku dhaji natiijada HTML. Qaabka ayaa ku siinaya xoriyad aad ciyaarta uga dhigto mid laga heli karo meeraha kala duwan adoo adeegsanaya biraawsarka. Haddii aad rabto inaad ka dhigto PC ama barnaamijka casriga ah, waa inaad isticmaashaa beddelaha.
Isku duub (bilaash): Windows | macOS | Linux | Shabakad
2. Engine aan dhab ahayn
Mashiinka aan rasmiga aheyn wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wax walba ka sameysid ciyaaraha fudud ee 2D illaa cinwaanada leh shaashad 3D muuqaal leh. Aragti ahaan, waxaad u baahan tahay inaad yeelato xirfado barnaamij si aad ugu isticmaasho. Laakiin xal bilow-saaxiibtinimo ayaa la bixiyaa, loo yaqaan Plano.
Qalabku waa mid aad u awood badan oo loo isticmaali karo mashaariicda adag, sida Ku celi de Final Fantasy VII. Waa suurtogal in loo dhoofiyo ciyaarta la abuuray goobo kala duwan, sida PC, ciyaarta fiidiyowga, taleefannada casriga ah, qalabka xaqiiqda dalwaddii, iyo kuwo kale.
Adeeggu waa lacag la’aan, illaa iyo inta mashruucaagu ka helayo $ 3,000. Halkaas, abuure waa inuu ku bixiyaa 5% faa iidooyinka Epic Games, horumariyaha Engine aan dhab ahayn.
Moodal aan caadi ahayn (bilaash): Windows | macOS | Linux
GameMaker Studio 2 - Jiid iyo Diid
In kasta oo ay taageerayaan ciyaaraha 3D, GameMaker ayaa caan ku ah horumarinta ciyaaraha 2D. Barnaamijku wuxuu u muuqdaa mid fudud in la isticmaalo loona oggolaado qof walba inuu abuuro ciyaar u gaar ah. Adigoon qorin xariijin koodh ah, adoo adeegsanaya habka jiita iyo hoos u dhaca.
Laakiin taasi micnaheedu maahan in qof kasta oo yaqaan sida loo codeeyo uusan ku raaxeysan karin. Haddii aad ka mid tahay kooxdaas, waxaad u qaabeyn kartaa abuurista qaab kasta oo aad jeceshahay. Adeeggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u dhoofiso natiijada goobo badan. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah waa lagama maarmaan in la bixiyo qadar dheeri ah.
GameMaker Studio 2 (la bixiyay, oo leh nooca tijaabada bilaashka ah): Windows | Mac OS
Gamesalad waa ikhtiyaar wanaagsan kuwa ku cusub kobcinta ciyaarta. Uma baahna aqoonta luuqadaha barnaamijka, taas oo kuu oggolaaneysa inaad abuurto adoo adeegsanaya qaab jiid-iyo-dhibic.
Software-ka wuxuu dammaanad-qaadayaa natiijooyinka wanaagsan ee 2D, inkasta oo leh ilo kooban. Barmaamijku wuxuu kaloo leeyahay nooc loogu talagalay waxbarashada, ujeeddadiisuna tahay barashada fikradaha barnaamijyada, qaabeynta ciyaarta iyo abuurista warbaahinta dhijitaalka ah.
Macaamiisha barnaamijka 'Pro' waxay u daabici karaan dhammaan barnaamijyada waaweyn sida HTML, kombiyuutarka, iyo aaladaha moobaylka.
GameSalad (la bixiyay, oo leh nooca tijaabada bilaashka ah): Windows | Mac OS
5. Abuuraha ciyaarta doorka
Sida magaceeda ka muuqata, RPG Maker waa aalad loogu talagalay horumarinta ciyaaraha 2D-style. Doorka ciyaarta. Barnaamijku wuxuu leeyahay noocyo badan oo la heli karo, oo bixiya astaamo kala duwan. RPG Maker VX wuxuu balan qaadayaa inuu yahay mid aad u fudud oo xitaa cunug isticmaali karo.
Taasi waa, looma baahna aqoon barnaamij si loo horumariyo ciyaar, kaliya jiido oo hoos u dhacdo. Codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto jilayaal, geliso muusikada iyo saamaynta dhawaaqa, iyo howlaha kale. Ciyaarta waxaa loo dhoofin karaa HTML5, Windows, macOS, Linux, Android, iyo iOS.
Abuuraha RPG (la bixiyay, oo leh nooc tijaabo ah oo lacag la'aan ah): Windows
Loo maqli karo / YouTube
Quest waa aalad kuu oggolaaneysa inaad ku ciyaartid ciyaaro sheeko xariir ah xitaa adigoon ogeyn sida barnaamij loo sameeyo. In kasta oo diiradda la saarayo qoraalka, haddana waxaa suurtagal ah in la geliyo sawirro, muusig iyo saamaynta dhawaaqa. Fiidiyowyada YouTube iyo Vimeo ayaa sidoo kale la taageeraa.
Qof kasta oo leh xirfadaha barnaamijka wuxuu u habeyn karaa muuqaalka ciyaarta qaab kasta oo ay doorbidaan. Natiijada waxaa loo dhoofin karaa kombuyuutarka ama codsi moobiil ah.
Raadi (bilaash): Windows | Shabakad
Midnimadu waa ikhtiyaar kuwa garanaya barnaamijyada. Software-ka, oo bilaash u ah isticmaaleyaasha kasbanaya in ka yar $ 100.000 sanadkii, ayaa kuu oggolaanaysa inaad abuurto ciyaaro 3D ah oo muuqaallo qurux badan wata.
Barnaamijku wuxuu leeyahay qalab animation, maqal iyo muuqaal ah, gelinta saamaynta, iftiiminta iyo waxyaabo kaloo badan. Shaqada waxaa lagu daabici karaa barnaamijyo kala duwan, sida PC, taleefanka gacanta, ciyaaraha fiidiyowga iyo qalabka VR iyo AR.
Midnimo (bilaash, oo leh xulashooyinka qorshaha lacag bixinta): Windows | macOS | Linux
Kahoot runtii maahan madal horumarineed, laakiin waxay faa'iido u yeelan kartaa kuwa doonaya inay abuuraan ciyaaro waxbarasho oo fudud. Boggu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto weydiimaha, dhaqdhaqaaqa run ama been ah, xujooyinka, oo ka mid ah ilaha kale ee loo adeegsado fasallada farsamada ama wajiga ah.
Waa suurtagal in la dejiyo tirada dhibcaha oo la geliyo Saacad, si ciyaarta looga dhigo xitaa mid xiiso iyo xamaasad badan. Wax walba waxaa lagu soo bandhigaa si shaqsi ah shaashadda arday kasta, iyada oo loo marayo arjiga loo qoondeeyey ama nooca adeegga ee shabakadda.
Kahoot! (bilaash, oo leh ikhtiyaarrada qorshe bixinta): Webka | Android | macruufka
Barnaamij noocee ah ayaa loo isticmaalaa in lagu abuuro ciyaaro?
Wax walba waxay ku xirnaan doonaan xirfadahaaga, ujeeddooyinkaaga iyo nooca qalabka aad haysato.
Waxaa jira qalab bixiya ciyaaro diyaar ah, sida Kahoot, halka kuwa kale u baahan yihiin xirfadaha luqadda barnaamijka, sida Unity. Markaa kahor intaadan dooran, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso naqshadeyntaada iyo xirfadaha barnaamijka.
Barnaamijyada ciyaarta u diyaar garoobay waxay ku habboonaan karaan kuwa aan dooneynin inay maal gashadaan xirfad horumarineed. Kuwa awoodda u leh inay wax abuuraan iyagoo gujinaya isla markaana jiidaya walxaha ciyaarta waxay u baahan yihiin wax yar oo aan fahmin mawduuca.
In kasta oo ay fududahay in la isticmaalo, waxay bixiyaan xorriyad abuur badan iyo walxo u habayn ah. Waa ikhtiyaar wanaagsan kuwa doonaya inay bartaan barnaamijyada iyo maal-gashadaan ciyaaraha adduunka. Tani waa kiiska GameMaker Studio 2 iyo Quest.
Waxaa xusid mudan in barnaamijyada badankood, xitaa kuwa leh ilaha bilowga, ay leeyihiin ilo loogu talagay kuwa aqoonta u leh barnaamijka. Isticmaalayaashani waxay sii sahamin karaan xulashooyinka, iyagoo si khaas ah u waafajinaya dhinac kasta oo ciyaarta ka mid ah.
Sidoo kale waa muhiim inaad tixgeliso qalabka ay tahay inaad horumariso. Kahor intaadan bilaabin soo dejinta barnaamijka, waa inaad hubisaa haddii kumbuyuutarkaagu buuxiyo shuruudaha ugu yar. Waa lagama maarmaan inaad haysato qalab kuu oggolaanaya inaad ku shaqeyso dhibaato la'aan iyo guul darrooyin.
Haddii kale, dooro softiweer fudud oo leh kheyraad yar ama aalad internetka ah. Habkaas, ugu yaraan, waxaad sameyn kartaa wax alla wixii aad rabto.
Ma rabtaa inaad sameysid ciyaar ku saleysan sheeko mise waxaad doorbideysaa ciyaar 3D FPS ah? Kadibna waxaa lagama maarmaan ah in la falanqeeyo ilaha barnaamijku bixiyo, si loo hubiyo in ay gaarsiin doonto natiijada la doonayo.
Haddii ciyaarta aad rabto inaad horumariso ay leedahay codsi gaar ah, waxaan kugula talineynaa inaad doorato. RPG Maker, tusaale ahaan, wuxuu siiyaa astaamo gaar ah nooca sheekadan, oo aad u badan tahay inaadan ka helin aalado kale. Ama waxaad ku arki doontaa iyaga dareen yar.
Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la hubiyo haddii software-ka uu u dhoofiyo ciyaarta barxadda la doonayo. Ma jirto wax macno ah in la horumariyo ciyaar buuxda ka dibna la ogaado in aan lagu ciyaari karin taleefanka gacanta ama headset-ka VR.
Sidee loo abuuraa codsi adoon ogayn barnaamijka? Soo hel qalab yaab leh
Barnaamijyada tijaabada ah ee loogu talagalay madaddaalada iyo barashada isla waqtigaas
Codsiyada macquulka ah ee lagu tababaro fikirka iyo xusuusta